Miyuu Harry Kane ku soo bilaabanayaa kulanka habeen dambe dhexmari doona Kooxaha Tottenham iyo Man United? – Jose ayaa ka jawaabaya – Gool FM
Miyuu Harry Kane ku soo bilaabanayaa kulanka habeen dambe dhexmari doona Kooxaha Tottenham iyo Man United? – Jose ayaa ka jawaabaya
(London) 18 Juun 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham ee Jose Mourinho ayaa xaqiijiyey in kabtanka xulka qaranka England ee Harry Kane uu ku soo bilaaban doono kulanka habeen dambe ee Premier League ay soo dhoweyn doonaan Manchester United.
Weeraryahanka 26-sano jirka ayaan ciyaarin tan iyo markii uu dhaawac muruqa ah uu ka soo gaaray kulan ay kooxdiisa Spurs ka horjeedday Southampton 01 bishii Janaayo, waxaana lagama maarmaan noqotay in qalliin lagu sameeyo, laakiin taam buuxa ayuu noqday markii uu ka faa’iideystay mudaddii lagu jiray karaantiilka faafaha Coronavirus.
“Wuxuu u shaqeynayaa si aad u wanaagsan, waxaan kuu sheegi karaa in wax dhibaato ah aysan jirin, waana uu ku soo bilaabanayaa kulanka” ayuu yiri Mourinho oo ka hadlayey xaaladda Kane iyo haddii uu ku soo bilaabanayo kulanka Man Utd.
“Miyuu ciyaarayaa 90 daqiiqo, 80, 70 ama 60? Kulanka kaliya ayaa taas noo sheegaya.”
Dhinaca kale labada xiddig ee furaha u ah kooxda ee Weeraryahan Son Heung-min iyo khadka dhexe ee Moussa Sissoko, kuwaasoo labadooduba qalliin lagu sameeyey sanadkaan ayaa sidoo kale ku soo bilaaban doona kulanka Manchester United.
Kane oo ahaa gooldhaliyaha ugu sarreeya Spurs shantii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay ayaa leh 17 gool xilli ciyaareedkan, waana in hal ka badan gooldhaliyaha kale ee Son.
Eric Garcia oo Isbitaalka laga soo saaray kaddib dhaawicii halista ahaa ee xalay soo gaaray kulankii Man City iyo Arsenal
Kooxda Horseed oo sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Somali Premier League kaddib markii ay xasuuqday Raadsan